Turkey oo furay saldhigii 2-aad ee Afrika iyo Carabta oo godkooda uu biyo ugu galay! – PuntSom – kalasoco wararka
in Wararka, Wararka Caalamka, Wararka Somalida December 30, 2017	243 Views
24 Bishaan ayey Turkey iyo Sudan kala saxiixdeen 12 heshiis oo uu ka mid ahaa in Jazeerada SAWAAKIN ee Badda Cas lagu wareejiyo Turkey iyaga ka dhisi doona xarumo Milatery, Dalxiis iyo Matxafyo Taariikhdii Dawladii Cusmaaniyada ee xukumi jirtay Xeebaha Badda Cas iyo Badweynta Hindiya ee Bariga Afrika Qarniyadii 16 aad ilaa 19 aad.
Qarnigii 20 aad markii uu burburinayey Gumeysigii reer Galbeedku Dawladii Cusmaaniyada ee fadhigeedu ahaa Istanbul waxaa loo adeegsaday qaar ka mid ah wadamada Carabta gaar ahaan Khaliijka, iyada oo xilligaas lagu kiciyey laguna abaabulay (Yaa tola-heey! Carabtii Asharaafta aheed ayaa Turkey gumaysanayaa)!
Maantana taa oo kale ayey dib usoo celiyeen, markii lafa caay iyo awoowe ku faan ay gaartay oo Cabdalla Bin Zaayid yiri; Ordogan Awoowe-yaashii tuugo ayey ahaayeen, Dahab iyo Khayraad kale ayeyna ka xadeen Madiina Al Munawara, halka Ordogan ugu jawaabay in Cabdalle Awoowe-yaashii ahaayeen; daba-dhilifyo u shaqeeya Gumeystihii Ingiriiska).
25 Bishaan markii Madaxweyne Al Bashiir ku wareejiyey Jaziirada Sawaakin Turkey ayey afka furteen ilaa ay ku eedeeyaan Al Bashiir in uu yahay Khaa’in ku gabood falay Amniga Carabta, qaarna ay gaarsiiyeen; in Sudan iyo Somaliya yihiin; Cabiid u xiistay adoonsigii Turkey
Si kasta ha loo cabiro ama ha loo qarsado ee waxaa cad qodobada kala ah
:1-In Dawlada Turkey noqotay Quwad iyo Awood saameyn ku leh Gobalka Bariga dhexe, Carabta, Afrika iyo Dunida Islaamka.
2-In Dawladaha Carabtu ay galeen go’adoon Siyaasadeed gaar ahaan Xulafada Sacuudiga markii ay Cadaw ka dhigteen Turkey iyo Iiran, Shucuub-tooduna weli diidantahay xulafeysiga Israel.
3-In Sudan iyo Somaliya Carabtu aysan u ogoleen hurumar sida iyaga oo kale ama heshiis ay la galaan Dawlado kale
B-In ay reebato kuwii dan badani ugu jirto kuwa kalena iska erido, hadii kale xasilooni siyaasadeed lama heli karo inta dusheeda la isku haysto!